Qoorta & luqunta maxay u diidayaan inay furaan
Kal-fadhiga 3-aad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa qorshuhu ahaa inuu furmo 25-ka Nofeembar 2020, laakiin sida ay sheegeen xildhibaannada Galmudug Axadle, madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa hor istaagay furitaanka kal-fadhiga 12-aad. Sababta ay Kaariye iyo Gacal uga horyimaadeen furitaanka baarlamaanka ayay xildhibaanadu ku sheegeen inay ka baqayaan in xubnaha baarlamaanku ay ka doodaan ama wax ka weydiiyaan go’aanada madaxweyne Qoorqoor ee la xiriira doorashooyinka federaalka.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada ayaa Axadle u sheegay in Hogaamiye Qoorqoor iyo Maxamed Nuur Gacal ay iska kaashadeen sidii loo xaqiijin lahaa in baarlamaanka Galmudug uusan furmin ka hor inta aan la xalin khilaafka Baarlamaanka Federaalka iyo doorashada madaxweynaha.
Maxaa ka jira Mooshinka ka dhanka ah Hogaamiyaha & Afhayeenka Baarlamaanka?
Xildhibaano Ka Tirsan Galkacyo, Somalia Kulamada Tamarta Dhuusamareeb ee ku saabsan gudbinta mudaharaadyada looga soo horjeedo madaxweyne Gacal ayaa ku eedeeyay caqabad ku ah shaqada iyo furitaanka kalfadhiga 3-aad ee baarlamaanka, Mudanayaasha Barlamanka ayaa wadaagay gudoomiyaha mustaqbalka safar kujooga Turkey 12-kii Janaayo-21 wuxuu ku noqon doonaa Muqdisho, isagana waxaana lagu wadaa in madaxweynaha uu u safro magaalada Dhuusamareeb.
Sida ay sheegeen xildhibaanada Galmudug, Maxamed Nuur Gacal wuxuu ka xayuubiyey labadiisa kuxigeen awoodoodii iyo awoodii ay lahaayeen maqnaashaha baarlamaanka, sidaa darteed dhamaan arrimaha la xiriira howlaha baarlamaanka waxay ku xiran yihiin gudoomiyaha baarlamaanka, waana tan keentay in shaqada Barlamaanka waa lagu xadidayaa sida ay qorsheeyeen Hogaamiyaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Mooshin ka dhan ah Hogaamiye Qoorqoor!
Saraakiil ka tirsan labada heer ee dowladda federaalka ayaa Axadle u sheegay in kadib markii Axmed Qoqoor uu saxiixay heshiiskii doorashada dadban ee DG iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Muqdisho bishii Sebtember-2020, uu bilaabay inuu taageero ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo ee mar labaad, sida ay sheegeen xildhibaanada Galmudug. Hogaamiyaha ayaa si furan ugu sheegay dad kala duwan in halkii laga taageeri lahaa mucaaradka ay u fududaan laheyd inuu taageero madaxweynaha xilka haya asaga oo sheegay in danta Galmudug ay ku jirto taageerida iyo la shaqeynta dib u doorashada Hogaamiye Farmaajo.
The Central African Prime Minister is visiting for
Somali troops catch Al-Shabaab militants all through a